Ndozi na mweghachi | January 2020
Weghachite ehichapụ foto na gam akporo na DiskDigger
Ọtụtụ mgbe, mgbe ị na-enweta nbudata data na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba, ịkwesịrị iweghachite foto site na ebe nchekwa nke Android. N'oge gara aga, saịtị ahụ tụlere ọtụtụ ụzọ iji weghachite data sitere na ebe nchekwa gam akporo (lee Nweta data na gam akporo), ma ọtụtụ n'ime ha gụnyere itinye usoro ahụ na kọmputa, ijikọ ngwaọrụ ahụ na usoro mgbake usoro.
Iweghachite Data - R-Studio
Usoro nchịkọta data nke R-Studio bụ otu n'ime ndị a rịọrọ n'etiti ndị chọrọ iji weghachite faịlụ sitere na diski ike ma ọ bụ mgbasa ozi ndị ọzọ. N'agbanyeghị ọnụahịa dị elu, ọtụtụ na-ahọrọ R-Studio, a pụkwara ịghọta nke a. Nwelite 2016: n'oge mmemme ahụ dị na Russian, nke mere na onye ọrụ anyị ga-adịkwu mfe iji ya karịa oge.
Ihe omume iji weghachi data na Android MobiSaver Free
Taa m ga egosiputa usoro mmezi data free free EaseUS Mobisaver maka gam akporo Free. Na ya, ị nwere ike ịnwa igbake foto ehichapụ, vidiyo, kọntaktị na ozi SMS na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba, ya na ihe a niile n'efu. Ozugbo m dọrọ gị aka ná ntị, usoro ihe omume ahụ chọrọ ikike mgbọrọgwụ na ngwaọrụ: Otu esi enweta ikike mgbọrọgwụ na gam akporo.
Ihe karịrị otu ugboro dere banyere ngwaọrụ n'efu maka mgbake data, oge a anyị ga-ahụ ma ọ ga-ekwe omume iji weghachite faịlụ ehichapụ, yana data sitere na diski ike a na-eji R.Saver. E mepụtara isiokwu ahụ maka ndị ọrụ novice. Usoro SysDev nke mepụtara ihe omuma a, bu nke puru iche n'inweputa ihe omuma ndi ntaneti di iche iche di iche iche, ma bu ihe di nma nke ihe ndi ozo.
Recuva - weghachite faịlụ weghaara
Usoro ihe omume a bụ Recuva bụ otu n'ime ihe nchekwa kachasị ewu ewu na data site na windo mbanye, kaadị nchekwa, diski ike ma ọ bụ ụgbọala ọzọ na NTFS, FAT32 na ExFAT faịlụ faịlụ na ezigbo aha (site na otu mmepe ahụ dịka onye na-ahụ maka enyemaka CCleaner). N'ime mmemme nke usoro ihe a: enwere ike iji ya eme ihe, nchebe, asụsụ nke asụsụ Russian, ọnụnọ nke nsụgharị na-anaghị achọ nkwụnye na kọmputa.
Windows enweghị ike ịmecha nhazi ....
Ezi ụbọchị. Taa, onye ọrụ kọmputa ọ bụla nwere kọmputa USB, ọ bụghị otu. Mgbe ụfọdụ, ọ dị ha mkpa ka a hazie ya, dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-agbanwe faịlụ faịlụ ahụ, ma ọ bụrụ na ọ bụ njehie maọbụ naanị mgbe ịchọrọ ihichapụ faịlụ niile site na kaadị ọkụ. Ọtụtụ mgbe, ọrụ a dị ngwa, ma ọ na-eme na njehie na-apụta na ozi: "Windows enweghị ike ịmecha usoro" (lee
Laptọọpụ dị ọkụ. Ihe ị ga-eme
Mmiri elu nke laptọọpụ bụ nsogbu kachasị mkpa ndị na-arụ ọrụ laptọọpụ nwere. Ọ bụrụ na oge anaghị ekpochapụ ihe kpatara mmeri oke, kọmputa nwere ike ịrụ ọrụ nwayọ, ma mesịa mebie kpamkpam. Isiokwu ahụ na-akọwa isi ihe kpatara mmeri oke, otu esi amata ha na ụzọ kachasị esi edozi nsogbu ndị a.
Ọ bụrụ na Ịntanetị anaghị arụ ọrụ mgbe ị debesịrị Windows ... Ntuziaka ole na ole
Ezi ụbọchị. Mgbe ị wụnye Windows ọhụụ, dị ka a na-achị, usoro ahụ na-agbanwezi ọtụtụ parameters (na-eme ka ndị ọkwọ ụgbọala zuru ụwa ọnụ, na-esetịpụ nhazi firewall kasị mma, wdg). Ma, ọ dị nnọọ otú ahụ na ụfọdụ oge mgbe ịtinye Windows anaghị ahazi ya na-akpaghị aka.
Iweghachite faịlụ na UndeletePlus
Na mbụ, m edeelarị banyere usoro abụọ maka iji weghachite ehichapụ faịlụ, yana iweghachite data sitere na draịva siri ike na draịva flash: BadCopy Pro Seagate File Recovery Oge a anyị ga-atụle ihe omume dị otú ahụ - eSupport UndeletePlus. N'adịghị ka nke abụọ gara aga, a na-ekesa software a n'enweghị ụgwọ, Otú ọ dị, ọrụ ndị dị obere adịghị.
Igwe na-agba ọsọ (diski ike) na-ajụ maka nhazi, yana faịlụ (data) na ya
Ezi ụbọchị. Ị na-arụ ọrụ na windo mbanye, ị na-arụ ọrụ, mgbe ahụ, bam ... na mgbe ejikọtara ya na kọmpụta, a gosipụtara njehie: "Akwụghị diski n'ime ngwaọrụ ahụ ..." (ihe atụ na fig 1). Ọ bụ ezie na ị kwenyere na a na-akọwapụta ụgbọala mbu ma nwee data na ya (faịlụ nchekwa, akwụkwọ, edebe ihe ndekọ, wdg.
Pịa okpukpu abụọ (pịa): mee ya onwe gị nhazi kọmputa
Isi ihe kachasị mkpa na teknụzụ kọmputa ọ bụla bụ doro anya na bọtịnụ mkpọtụ aka ekpe. A ghaghị ịmịgide ya mgbe niile, ihe ọ bụla ị na-eme na kọmpụta: ma ọ bụ egwuregwu maọbụ ọrụ. Ka oge na-aga, bọtịnụ aka ekpe ahụ na-akwụsị ịdị ka ihe dịka ọ dị na mbụ, mgbe mgbe, pịa ọnụọgụ abụọ (pịa) amalite ime: ton.
Usoro kachasị mma iji weghachite ma na-edegharị faịlụ sitere na diski CD / DVD mebiri emebi
Ndewo Ọtụtụ ndị ọkachamara nwere ahụmahụ, echere m, nwere obere CD / DVD diski na nchịkọta ahụ: na mmemme, egwu, ihe nkiri, wdg. Ma e nwere otu nzaghachi maka CD - ha na-adị mfe ncha, mgbe ụfọdụ ọbụna site n'enyefeghị ya na traktị ụgbọala ( banyere obere ikike taa na-agba nkịtị :)).
Ezi ụbọchị. Echere m na ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ mgbe niile na akwụkwọ dị na Microsoft Word chere ihu na-adịghị mma: ha debere-dee ederede, dezie ya, ma na mberede, kọmputa amalitegharịa (ha gbanyụrụ ọkụ, njehie maọbụ naanị Okwu kpuchiri, kọọ ihe njedebe nke ime obodo).
Anya ncha mgbe ị gbanye kọmputa na buut Windows. Ihe ị ga-eme
Ndewo "Ọ na-esi ísì dị ka manu oku," echere m mgbe mbụ m hụrụ ihuenyo ojii mgbe m gbusịrị kọmputa ahụ. Ọ bụ eziokwu, ihe karịrị afọ 15 gara aga, ma ọtụtụ ndị ọrụ ka na-atụ egwu ya (karịsịa ma ọ bụrụ na e nwere ihe dị mkpa na PC). Ka ọ dị ugbu a, ihuenyo ojii bụ nwa, nnukwu esemokwu, n'ọtụtụ ọnọdụ, site na ihe e dere na ya, ị nwere ike ịhazi ma dozie njehie na ndenye ezighi ezi na os.
Ịdakwasị ebe nchekwa dị na Android dị ka nchekwa nchekwa na mgbake data
Ighachite data, ehichapụ foto na vidiyo, akwụkwọ na ihe ndị ọzọ sitere na ebe nchekwa nke ekwentị gam akporo na mbadamba nkume aghọwo ọrụ siri ike, ebe ọ bụ na nchekwa dị n'ime ya jikọtara ya site na protocol MTP ọ bụghị Mass Storage (dị ka USB flash drive) na ihe omume mgbake data agaghị achọta na weghachite faịlụ na ọnọdụ a.
Iweghachite data na Iweghachite aka
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na a na-akwụ ụgwọ nchịkọta data nchịkọta Akaụntụ, ị ga-ede banyere ya - ikekwe nke a bụ otu n'ime ngwanrọ kachasị mma nke na - enye gị ohere iweghachite faịlụ sitere na draịvụ ike na draịvụ USB dị n'okpuru Windows. E nwere ike ibudata usoro ikpe nke usoro ihe omume ahụ site na ntanetị ọrụ site na http://handyrecovery.com/download.
Nyocha na nsogbu nsogbu PC (software kachasị mma)
Ndewo Mgbe ị na-arụ ọrụ na kọmpụta, ọdịiche dịgasị iche iche nke ọdịda, emehie mgbe ụfọdụ, na ịchọta ihe kpatara ọdịdị ha n'ejighị ngwanrọ pụrụ iche abụghị ọrụ dị mfe! N'enyemaka isiokwu a, m chọrọ itinye usoro kachasị mma maka ịnwale na ịchọta PC nke ga - enyere aka idozi ụdị nsogbu niile.
Mgbasaozi Data Recovery Disk Drill maka Windows
N'isiokwu a, M na-agwa gị ka ị hụ ohere nke mmemme nchịkọta data ọhụụ ọhụrụ Disk Drill maka Windows. Ma n'otu oge ahụ, anyị ga-anwale, otu ọ ga esi enwe ike iweghachite faịlụ site na windo a na-agbanye ọkụ (Otú ọ dị, site na nke a, ọ ga-ekwe omume ikpebi ihe ga-esi na diski ike).
Iweghachite Data site na USB Flash Drive - nzọụkwụ site nzọụkwụ ntụziaka
Ndewo Taa, onye ọrụ kọmputa ọ bụla nwere windo mbanye, ọ bụghị otu. Ọtụtụ ndị na-ebu ihe ọmụma na draịvụ ọkụ, nke na-efu ihe karịrị ngwa windo n'onwe ya, ma ghara ime nkwado ndabere (na-ekwenyeghị na ọ bụrụ na agbawaghị ọkụ ọkụ, ọ bụghị wụsara ma ọ bụ kụrụ, mgbe ahụ ihe niile ga-adị mma) ... Ya mere echere m ruo otu ụbọchị Windows nwere ike ịchọpụta eriri flash USB, na-egosi usoro faịlụ RAW ma na-enye ya ịhazi ya.
https://termotools.com ig.termotools.com © Ndozi na mweghachi 2020